လူ့ဘဝနောကျပိုငျးနှဈကာလမြားသညျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးအားအမွငျ့ဆုံး အခြိနျမြားပငျဖွဈကွောငျး သိပ်ပံနညျးကြ အထောကျအထားမြား တှရှေိ့လာလရော . . . .
အမရေိကနျပွညျထောငျစု "အိုငျအိုဝါ" ပွညျနယျကောလိပျ စိတျပညာဌာနမှူး "ဝီလြံအိုဝငျ" သညျ ကောလိပျအဆောကျအအုံ အထပျခိုးတဈခုတှငျ မမြှျောလငျ့သော စာရှကျစာတမျးမြားကို တှရှေိ့ခဲ့သညျ။ ယငျးတို့မှာ ၁၉၁၉ ခုနှဈ ကောလိပျကြောငျးသား (၁၇၉)ယောကျတို့အား စိတျစှမျးရညျမြား လလေ့ာစမျးသပျရာတှငျ ရရှိသော အမှတျစာရငျးမြားဖွဈလသေညျ။
ထို အမှတျစာရငျးမြားကိုအခွပွေု၍ ထိုကြောငျးသားဟောငျးမြားအား ဆကျသှယျစုံစမျးရာတှငျ (၁၂၇)ဦးနှငျ့ အဆကျအသှယျရရှိခဲ့သညျ။ ထိုသူတို့၏ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးကို ထပျမံလလေ့ာစမျးသပျရာတှငျ အသကျကွီးလာလြှငျ စိတျသညျ ကိုယျခန်ဓာလိုပငျ ယိုယှငျးလာသညျဟူသော အယူအဆဟောငျးမှာ မှားယှငျးကွောငျး အံ့သွလောကျအောငျ လလေ့ာတှရှေိ့ရလသေညျ။
ထိုအခကျြနှငျ့ပတျသကျ၍ ဒေါကျတာအိုဝငျက "အသကျကွီးလာရငျ ဦးနှောကျအခွအေနေ ယိုယှငျးလာတဲ့လက်ခဏာ မတှရေ့ပါဘူး။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးရညျတှသော တိုးတကျလာတာ တှရေ့ပါတယျ" ဟု ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထိုသူတို့သညျ တက်ကသိုလျမြားတှငျ လေးနှဈကွာ ပညာသငျယူခဲ့ပွီး လကျတှဘေ့၀ အတှအေ့ကွုံမြားလညျး နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွုံတှခေဲ့ရပွီးဖွဈသဖွငျ့ အထှထှေဗေဟုသုတမေးခှနျးမြားတှငျ ရမှတျမြား ပိုမိုမွငျ့မားလာကွောငျး၊ လကျတှဆေုံ့းဖွတျမှုဆိုငျရာမြားနှငျ့ပတျသကျ၍လညျး ရမှတျမြား ပိုမိုမွငျ့မားလာကွောငျးကို လလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့သညျ။
"ဒါပမေယျ့ စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံးကတော့ ကွောငျးကြိုးဆငျခွငျမှုနဲ့ တှေးချေါမွျောမွငျမှုဆိုငျရာ စမျးသပျမှုတှမှော ရမှတျတှေ တိုးတကျလာတဲ့ အခကျြပါပဲ။ အရှယျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ လူ့ဦးနှောကျဟာ သှကျလကျမွနျဆနျပွီး အသိပညာတှကေို ခံယူနိုငျစှမျး အကောငျးဆုံးကာလို့ ယူဆရပမေယျ့ စမျးသပျတှရှေိ့ခကျြအရ လူအမြားစုဟာ အသကျ(၅၀)အရှယျမှာ အရှယျကောငျးခြိနျကထကျ ဉာဏျစှမျးအား ပိုမိုမွငျ့မားလာတယျဆိုတဲ့ အဖွထှေကျနပေါတယျ" လို့ ဒေါကျတာအိုဝငျက ဆိုပါတယျ။
ဉာဏျရညျထကျမွတျသူမြားသညျ အသကျကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ ဉာဏျရညျမြား ပိုမိုထကျမွကျလာကွောငျး၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာစှမျးရညျမြားသညျ အသကျ(၂၀)နှငျ့ (၅) အတှငျး မှနျမှနျပငျ တိုးတကျလာကွောငျး၊ အတိတျက ဉာဏျရညျအသငျ့အတငျ့ရှိသူ လူကွီးမြားစှာသညျ အသကျ(၇၀) မှ (၈၀) အထိ ဉာဏျရညျမြား ဆကျလကျတိုးတကျနကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။
သိပ်ပံနညျးကြ အဖွထေုတျရာတှငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးမြားဖွဈသော မှတျဉာဏျနှငျ့ သငျယူနိုငျမှုစှမျးရညျတို့သညျ အထှထှေအေသိဉာဏျမြားလိုပငျ ဆုတျယုတျမှုမရှိကွောငျး၊ အတိတျကာလအဖွဈအပကျြမြားကို ပွနျလညျမှတျမိနိုငျသောစှမျးရညျမှာ လူငယျ၊ လူလတျ၊ လူကွီး ဟူ၍ ခွားနားမှုမရှိကွောငျး . . . အသကျကွီးသူမြားသညျ စဉျးစားခြိနျ ပိုကွာသျောလညျး စာလုံးမြာကိုပိုမိုတိကစြှာ မှတျမိနိုငျကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။ အသကျ(၇၀)ထိ လူမြားစှာကို ရုရှားဘာသာနှငျ့လကျရညျတိုပညာရပျတို့ကို လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးရာတှငျ ငယျရှယျသူမြားလိုပငျ လှယျကူစှာ တတျမွောကျနိုငျကွောငျး သုတသေနပညာရှငျတဈဦးက လလေ့ာတှရှေိ့လသေညျ။
အသကျကွီးလာသျောလညျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးရညျမြား ကဆြငျးခွငျးမရှိကွောငျး အထောကျအထားမြား ရှိနသေျောလညျး အသကျကွီးရငျ့လာသော လူမြားစှာတို့သညျ သူတို့၏ စှမျးရညျကို ထိရောကျစှာအသုံးမခဘြဲ ဖွုနျးတီးနမေိကွသညျ။ အိုမငျးလာသူမြား၏ စိတျဓာတျမြား သှကျလကျထကျမွတျနစေရေနျ အသိဉာဏျတိုးတကျစသေော လကေ့ငျြ့အားထုတျမိမြား ပွုလုပျရနျလိုအပျသညျ။
အိုမငျးရငျ့ရျောမှုဆိုငျရာ အမရေိကနျထိပျတနျးသူတသေနပညာရှငျတဈဦးက "ခတျေသဈဆေးပညာနဲ့ နညျးပညာတို့ရဲ့အကြိုးကြေးဇူးကွောငျ့ အသကျကွီးရငျ့လာသူတှဟော လူ့ဘဝရဲ့ သဈလှငျမွငျ့မားတဲ့ အခွအေနတေဈမြိုးကို ဖျောထုတျနိုငျမယျ့လူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီအခကျြကို ကြှနျတျောတို့ကောငျစှာသဘောပေါကျရငျ ကြှနျတျောတို့ဟာ လူ့ယဉျကြေးမှု တဈခုကို ဖျောထုတျလာနိုငမှာပဲဖွဈပါတယျ" လို့ ဆိုပါတယျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ လူတှဟော အသကျရှယျကွီးရငျ့လာပမေယျ့ ဉာဏျပညာတှဟော သဆေုံးသှားတာမဟုတျတဲ့အတှကျ ထိုဉာဏျပညာတှကေို အကြိုးရှိစှာ အသုံးခနြိုငျစရေနျ ရညျမှနျးလြှကျ . . .
"The Brain is Wider Than the SKY!!!"
လူ့ဘ၀နောက်ပိုင်းနှစ်ကာလများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားအမြင့်ဆုံး အချိန်များပင်ဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများ တွေ့ရှိလာလေရာ . . . .
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု "အိုင်အိုဝါ" ပြည်နယ်ကောလိပ် စိတ်ပညာဌာနမှူး "၀ီလျံအိုဝင်" သည် ကောလိပ်အဆောက်အအုံ အထပ်ခိုးတစ်ခုတွင် မမျှော်လင့်သော စာရွက်စာတမ်းများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ ၁၉၁၉ ခုနှစ် ကောလိပ်ကျောင်းသား (၁၇၉)ယောက်တို့အား စိတ်စွမ်းရည်များ လေ့လာစမ်းသပ်ရာတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်းများဖြစ်လေသည်။
ထို အမှတ်စာရင်းများကိုအခြေပြု၍ ထိုကျောင်းသားဟောင်းများအား ဆက်သွယ်စုံစမ်းရာတွင် (၁၂၇)ဦးနှင့် အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို ထပ်မံလေ့လာစမ်းသပ်ရာတွင် အသက်ကြီးလာလျှင် စိတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာလိုပင် ယိုယွင်းလာသည်ဟူသော အယူအဆဟောင်းမှာ မှားယွင်းကြောင်း အံ့သြလောက်အောင် လေ့လာတွေ့ရှိရလေသည်။
ထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာအိုဝင်က "အသက်ကြီးလာရင် ဦးနှောက်အခြေအနေ ယိုယွင်းလာတဲ့လက္ခဏာ မတွေ့ရပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တွေသာ တိုးတက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်" ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုသူတို့သည် တက္ကသိုလ်များတွင် လေးနှစ်ကြာ ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဘ၀ အတွေ့အကြုံများလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်သဖြင့် အထွေထွေဗဟုသုတမေးခွန်းများတွင် ရမှတ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာကြောင်း၊ လက်တွေ့ဆုံးဖြတ်မှုဆိုင်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရမှတ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
"ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှုနဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ရမှတ်တွေ တိုးတက်လာတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ လူ့ဦးနှောက်ဟာ သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီး အသိပညာတွေကို ခံယူနိုင်စွမ်း အကောင်းဆုံးကာလို့ ယူဆရပေမယ့် စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်အရ လူအများစုဟာ အသက်(၅၀)အရွယ်မှာ အရွယ်ကောင်းချိန်ကထက် ဥာဏ်စွမ်းအား ပိုမိုမြင့်မားလာတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်နေပါတယ်" လို့ ဒေါက်တာအိုဝင်က ဆိုပါတယ်။
ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်သူများသည် အသက်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဥာဏ်ရည်များ ပိုမိုထက်မြက်လာကြောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များသည် အသက်(၂၀)နှင့် (၅) အတွင်း မှန်မှန်ပင် တိုးတက်လာကြောင်း၊ အတိတ်က ဥာဏ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသူ လူကြီးများစွာသည် အသက်(၇၀) မှ (၈၀) အထိ ဥာဏ်ရည်များ ဆက်လက်တိုးတက်နေကြာင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သိပ္ပံနည်းကျ အဖြေထုတ်ရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများဖြစ်သော မှတ်ဥာဏ်နှင့် သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်တို့သည် အထွေထွေအသိဥာဏ်များလိုပင် ဆုတ်ယုတ်မှုမရှိကြောင်း၊ အတိတ်ကာလအဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်သောစွမ်းရည်မှာ လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီး ဟူ၍ ခြားနားမှုမရှိကြောင်း . . . အသက်ကြီးသူများသည် စဉ်းစားချိန် ပိုကြာသော်လည်း စာလုံးမျာကိုပိုမိုတိကျစွာ မှတ်မိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အသက်(၇၀)ထိ လူများစွာကို ရုရှားဘာသာနှင့်လက်ရည်တိုပညာရပ်တို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရာတွင် ငယ်ရွယ်သူများလိုပင် လွယ်ကူစွာ တတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း သုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးက လေ့လာတွေ့ရှိလေသည်။
အသက်ကြီးလာသော်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ ကျဆင်းခြင်းမရှိကြောင်း အထောက်အထားများ ရှိနေသော်လည်း အသက်ကြီးရင့်လာသော လူများစွာတို့သည် သူတို့၏ စွမ်းရည်ကို ထိရောက်စွာအသုံးမချဘဲ ဖြုန်းတီးနေမိကြသည်။ အိုမင်းလာသူများ၏ စိတ်ဓာတ်များ သွက်လက်ထက်မြတ်နေစေရန် အသိဥာဏ်တိုးတက်စေသော လေ့ကျင့်အားထုတ်မိများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အိုမင်းရင့်ရော်မှုဆိုင်ရာ အမေရိကန်ထိပ်တန်းသူတေသနပညာရှင်တစ်ဦးက "ခေတ်သစ်ဆေးပညာနဲ့ နည်းပညာတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် အသက်ကြီးရင့်လာသူတွေဟာ လူ့ဘ၀ရဲ့ သစ်လွင်မြင့်မားတဲ့ အခြေအနေတစ်မျိုးကို ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကျွန်တော်တို့ကောင်စွာသဘောပေါက်ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်လာနိုငမှာပဲဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် လူတွေဟာ အသက်ရွယ်ကြီးရင့်လာပေမယ့် ဥာဏ်ပညာတွေဟာ သေဆုံးသွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ထိုဥာဏ်ပညာတွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်စေရန် ရည်မှန်းလျှက် . . .
Read times Last modified on Wednesday, 11 November 2020 11:32